I-Wei Sheng iNew Material Technology Technology, Ltd.
Wei Sheng New Material Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2019, ibekwe Hengshui, kwiPhondo Hebei, kufuphi Beijing. Singumthumeli othembekileyo othembekileyo.
Yintoni esinokukunika yona?
Ngokusisiseko sithumela ngaphandle umbala wombala wedangatye, sinemveliso yethu ukuyivelisa. Singumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthumeli ngaphandle wombala womgubo womlilo kwaye besisoloko sihlanganyela kwimizi-mveliso yomlilo yomlingo kunye nakwishishini lomlilo lokudibanisa iR & D, imveliso kunye nentengiso iminyaka emininzi.
Yintoni umbala womlilo wedangatye? Abantu abaninzi abaqhelananga nale mveliso.
Yinto entsha, ikhuselekile kwaye inobuhlobo kuyo yonke indawo. Isetyenziselwa iBonfire Party, iCamfire Party, iqela losapho langaphakathi kunye nepati yaselwandle. . Isetyenziselwa ukongeza amadangatye ombala nakowuphi na umlilo weenkuni, banokusizisela umbala omnandi wombala, bakunike umboniso oqaqambileyo owahlukileyo!
Ungayisebenzisa njani? Ilula kakhulu! Awudingi ukuvula iipakeji, phosa nje iiphakheji ezingavulwanga kuwo nawuphi na umlilo ovuthayo, kulungile, emva koko ungabona umbala oMhle womlilo! Olona khetho lulungileyo kwiqela lakho.
Ngaphandle komgubo wombala wedangatye, Sikwathumela ngaphandle iiFireworks zaseTshayina, ezomlilo zabaThengi, iiFireworks eziBandayo, Izikhuselo zomlilo zekhekhe lokuzalwa, ikhandlela lamaRoma, oMatshini abaHlanganisiweyo kunye noMatshini woMthombo, Ibhombu yoMsi oMibalabala, sisebenzisana nemizi-mveliso emininzi e-Liuyang, idolophu. Yomlilo.
Sikwathumela ezinye izinto ezishushu ezithengisayo zaseTshayina, Nantoni na oyifunayo, ndixelele nje. Masisebenze kunye ukufumana le nto uyifunayo.Uninzi lwamaxabiso okhuphiswano kunye nomgangatho ophezulu! Ukonwaba kwakho kunye nokwoneliseka lixabiso lethu!
Sineenkqubo ezifanelekileyo zokulawula umgangatho kunye nokuhlola ukuqinisekisa ixesha lakho lokuhambisa kunye nomgangatho wemveliso. Sinikezela ngemveliso yohlobo, ii-OEM kunye neenkonzo ze-ODM. Sisebenza konke okusemandleni ethu ukunika ixabiso ngakumbi kubathengi bethu. Ndiyathemba ukuba sinokuba nentsebenziswano elungileyo yexesha elide!